Hevitra hanomezana zavakanto ho an'ny Krismasy | Famoronana an-tserasera
Isaky ny Krismasy dia manana lisitry ny olona homena isika, ary izany dia Tsy niraharaha de cabeza. Ny mpanjifa dia mamporisika antsika hividy mandritra ny taona sy izao, tenemos de manao. Ny hevitra tsara dia manome art.
Inona no fanomezana tsy ananako intsony? Ahoana no ahafahako ho original? Raha mitady ianao fanomezana samy hafa, ary te hahagaga anao ny a fanomezana famoronana Manoro hevitra anao izahay hanome fanomezana zavakanto. Omena fotsiny kanto? Toa sarotra izany, fa manome toky anao izahay fa misy safidy maro isan-karazany mba hampiroboroboana ny kolontsaina sy ny zavakanto amin'ity Krismasy ity.
1 Fanomezana ho an'ny saina mamorona
2 Jereo ny taratasyThrophy
3 Fanamarihana Aqua
4 Tapakilan'ny fampirantiana zavakanto
5 Artwork manokana
6 Takelaka sangan'asa
Fanomezana ho an'ny saina mamorona
Raha ny fanomezam-pahasoavana omentsika a Olona mamorona, tia zavakanto, ny asany dia mahatonga azy ho mavitrika amin'ny maha-publicista, mpamorona sary, sary azy, aza kivy satria misy safidy maro ho an'ny mahazoa. Misy safidy tsy manam-paharoa sy mamorona izay ho tianao.
Azonay antoka fa rehefa avy mahita ireo hevitra nomaninay ho anao ianao dia ho tianao ihany koa. Diniho!
Discover ny PaperThrophy
paperthrophy Izany dia marika alemanina natokana amin'ny famoronana indray ny lohan'ny biby izay nahantona ho amboara, fa amin'ity tranga ity dia natao taratasy. Sarivongana taratasy mitovy habe amin'ny fiainana ireo, ankoatry ny a fitakiana sosialy, ekolojika tanteraka ny fitaovany satria voamarin'ny FSC ho Eco-friendly. FSC dia fikambanana iraisam-pirenena iray izay mikarakara ny tontolo iainana sy manome alalana ireo orinasa tena manaraka ny masontsivana ara-tontolo iainana.
Ny mpamorona ity marika ity dia nikasa hitady endrika mety hananana ao an-trano ary afaka mahita azy isan'andro fa tsy ho reraka. Te hahita fifandanjana ihany koa aho ary hanao endrika maoderina. Raha izany dia, endrika cubic minimalista tratrany ny tanjony rehetra. Misolo tena ny fahatsorana izy ireo eo am-pamirapiratana ny hakantony.
ny lohan'ny biby ny endriny, amin'ny alàlan'ny amboara mihantona amin'ny rindrina; ary tarehimarika mijoro. Natao any Berlin, Alemana ary izy ireo tapaka ny milina ary aforitra avy amin'ny taratasy eco-friendly kalitao avo. Tsara homarihina fa ny papercraft tsirairay dia voamarina tsirairay, amin'ny tanana mba hahazoana antoka fa ny maodely ihany no tapaka sy mivalona tanteraka. Rehefa mandalo an'io izy ireo fanaraha-maso, que tombo-kase ofisialy avy amin'i Papertrophy.
Aza avela hampiambina anao ny aingam-panahy! Ity fanomezana ity dia a antsipirihany tena mahatsikaiky azonao omena ny olona mamorona. A kahie tsy tantera-drano afaka manoratra amin'izy ireo fa tsy manimba azy ireo. Tsy miempo ny taratasy rehefa asitrika anaty rano. Ny hany maharatsy azy dia mitaky ny fampiasana penina, pensilihazo na marika maharitra izy ireo.
Tapakilan'ny fampirantiana zavakanto
Efa zatra manome tapakila kokoa izahay mankany amin'ny teatra na seho amin'ny karazany rehetra. Etsy ankilany, vitsy ny olona manome tapakila fampirantiana zavakanto, tranombakoka na hetsika famoronana. Manoro anao izahay hijerena ny tanànanao na ny manodidina anao Ho gaga ianao amin'ny tolotra rehetra misy!
Raha mipetraka amin'ny tanàna lehibe ianao dia ho mora kokoa ny mahita ireo karazana hetsika ireo. Misy toerana tena mahaliana any Madrid, Barcelona ary Seville. Momba an'io CaixaForum. Ny asa sosialin'i La Caixa izay natokana hanolorana karazana isan-karazany fampirantiana, lahateny ary hetsika ara-pianakaviana.
Azonao atao koa ny mijery ilay mahazatra tranokala hetsika como el mifidy, izay ananany fizarana zavakanto ary hahita zavatra mahaliana ianao. Raha tsy fantatrao mpitari-dalana, jereo fa efa tolotra ho an'ny tanànan'ny rehetra España.
Efa nieritreritra ny hanome fanoharana ve ianao? Azo antoka fa efa te-hanao zavatra manokana ianao ary niafara tamin'ny fanontana sary namboarina tamina sary mahafinaritra. Mandehana lavitra, manoro anao izahay manafatra iray fanoharana manokana. Afaka mahita fanoharana manokana avy amin'i @hey_yuddies isika amin'ny sary.
Misy maro fomba samy hafa ary tsy maintsy mahita ilay mifanentana indrindra amin'ny toetranao ianao na amin'ilay olona homenao azy. Ohatra, afaka misafidy fomba iray hafa isika zava-misy etsy ankilany, fahazazana. Afaka manao izany koa ianao tery ny fikarohanao araka ny tetibola kasainao hampiasa vola. Afaka manamboatra a sariitatra, izay akaiky kokoa ny fomba komik sy mahatsikaiky, na ny fomba iray hafa zava-misy.
Raha tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana fikarohana, mamela anao mombamomba ny Instagram izay manolo-tena hanao an'io karazana Filaharana:
Manana a fomba tena izy mitambatra amin'ny famolavolana fisaka, tovovavy tanora, miasa mafy ary faly amin'ny asany. Raha te-hahita ny asany ianao dia aza misalasala mitsidika ny piraofiliny Instagram dia: @hey_yuddies
Ny fomba iray hafa tsy mitovy amin'ny an'ny teo aloha dia ny an'ny @illustrationsmaryf
Raha mitady fomba akaiky kokoa ianao sary, ity tovovavy ity dia manana fomba mety hampahatsiahy antsika ny manga. Yolanda no anarany ary afaka mahita azy amin'ny Instagram ianao @lolan_
Miaraka amin'ny fanampian'ny watercolors ary fitaovana niomerika, @ lidiacantos.illustration manao takelaka tena tsara homena. Tsidiho ny piraofilina Instagram ary fantaro bebe kokoa momba azy.
Safidy iray hafa tena mitombina mitadiava mpanao sary ary mividiana iray ho azy sarimihetsika famolavolana. Amin'izao fotoana izao, mamela antsika hahita tranonkala marobe ny Internet ahafahantsika mividy sary sy pirinty mivantana avy amin'ny mpanakanto misy antsika, tsy misy mpanelanelana. Mihabetsaka ny mahazatra ny manana ny mpanakanto tsirairay online store, na dia misy aza ecommerce izay manampy ny artista mahazo fahitana.
OleartIzany dia vavahadin-tserasera entin'ny olona telo: Sergio, Baptiste ary Raquel. Ireo dia matihanina amin'ny marketing izay nanapa-kevitra ny hampiroborobo ny tetikasa kanto, iray amin'ny filan'izy ireo. Manohana ireo tanora mpandraharaha Espaniola izy ireo, ankehitriny dia manana totalin'ny Mpanakanto 15 izay miara-miasa amin'izy ireo.
Oh Là L'art, dia galeriana kanto an-tserasera. Mpandraharaha roa avy any Barcelona no namorona azy io izay tia kanto. Izy ireo dia natokana amin'ny fisafidianana sy fampiroboroboana ireo mpanakanto vao misondrotra. Amin'ny alàlan'ny Facebook-dry zareo dia azonao atao ny manaraka ny vaovaon'izy ireo ary mahita mpanakanto vaovao.
Ny masoivoho mpamorona sasany dia manana fivarotana an-tserasera izay ahafahanao mividy zavatra kanto isan-karazany. Ny tranga iray dia ny an'ny Hey studio. Izany dia fianarana mamorona fanta-daza iraisam-pirenena monina any Barcelona. Izy ireo dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sary sy tetikasa fanoharana.
Izay manome kanto dia manome kolontsaina. Sombiny misy sanda fanampiny izy ireo izay mampita fihetsem-po, hevitra ary tantara maro. Ataovy ao an-tsaina fa afaka mahita kanto misy teknika samihafa ianao, izany hoe ny fampiasana ny hoso-doko, la fanoharana, la PRINTY SIVANINDAMBA LANDY na ny printy, ankoatra ny hafa.
Fitsidihana a tsena na foara manome antsika fotoana hahitana fanomezana isan-karazany vita tanana. Anisan'izany ny seramika, firavaka, zavakanto, fitaovam-pitaterana ary zavatra maro karazana. ny fivarotana kely manana sanda fanampiny ary ambonin'izany rehetra izany dia ho hitanao ny kalitaon'ny vokatrao.
Ny Tokana manohitra izay mety ho hitantsika, raha tsy manisy fiheverana fa mety ho somary avo kokoa ny vidiny, dia ny sarotra amin'ny fidirana ireo vokatra ireo, izany hoe, sarotra ny mihaona amin'ireo mpanao asa tanana ary manery antsika handeha manokana hividy azy ireo amin'ny foara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Hevitra hanomezana zavakanto ho an'ny Krismasy